ဘစ်တာကန်ကြီး - ဝီကီပီးဒီးယား
The Great Bitter Lake from Orbit (north is left)
30°20′N 32°23′E﻿ / ﻿30.333°N 32.383°E﻿ / 30.333; 32.383ကိုဩဒိနိတ်: 30°20′N 32°23′E﻿ / ﻿30.333°N 32.383°E﻿ / 30.333; 32.383
၁၉၄ km2 (၇၅ sq mi)
၁၈ m (၅၉ ft)
၂၈ m (၉၂ ft)
ဘစ်တာကန်ကြီး သည် အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် တည်ရှိသည့် ဆားကန်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ည်။ ၎င်းကန်သည် ဆူးအက်တူးမြောင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁၈၆၉ ခုနှစ် တူးမြောင်းမဖောက်လုပ်မီ ဘစ်တာကန်သည် ခြောက်သွေ့နေသည့် ဆားကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်ပိရမစ်စာများတွင် ဘစ်တာကန်ကြီးအကြောင်းကို ရေးသားထားကြသည်များ ရှိသည်။ တူးမြောင်းသည် ကန်ကြီးကို Mediterranean ပင်လယ် နှင့် ပင်လယ်နီ စသည့်ပင်လယ်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးထားသည်။ ထို့အပြင် ဤတူးမြောင်းသည် ဘစ်တာကန်ကြီးကို ဘစ်တာကန်ငယ်နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ပေးထားသည်။
ဆူးအက်တူးမြောင်းကို ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ကြသည့် သင်္ဘောများတို့သည် ဘစ်တာကန်ကြီးကို "ဖြတ်သန်းရသည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခု" အဖြစ် အသုံးပြုကြရသသည်။ ထိုနေရာတွင် သင်္ဘောများသည် အခြားသင်္ဘောများကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွေ့ဝိုက်ခြင်းများ လုပ်ကြရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Great Bitter Lake, Egypt (Oct. 26, 2009) (26 October 2009)။
↑ Madl, Pierre (1999). Essay about the phenomenon of Lessepsian Migration Archived 2016-07-31 at the Wayback Machine., Colloquial Meeting of Marine Biology I, Salzburg, April 1999 (revised in Nov. 2001).
↑ Jones၊ Greg (Apr 28, 2014)။ Waters of Death and Creation: Images of Water in the Egyptian Pyramid Texts။ BookBaby။ ISBN 9781483526362။ 18 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ [လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘစ်တာကန်ကြီး&oldid=675370" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၄:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။